Bal isha mari Dacdarada Shacabka Reer Muqdisho Maantay | KEYDMEDIA ONLINE
Bal isha mari Dacdarada Shacabka Reer Muqdisho Maantay
Wadooyin halbowle u ah isu socodka Muqdisho ayaa waxaa buux dhaafiyay biyaha roobka, taas oo keentay in ay shacabka ku dhaqani soo wajahdo dhibaato dhanka isu socodka ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Roobabkii xiliga deyrta ayaa ka da’yay saacado dhowr ah magaalada Muqdisho iyo deegaannada ku harereysan tan iyo shalay, kuwaas oo saameyn muuqata ku yeeshay dadka iyo duunyada.
Wadooyin halbowle u ah isu socodka Muqdisho ayaa waxaa buux dhaafiyay biyaha roobka, taas oo keentay in ay shacabka ku dhaqan soo wajahdo dhibaato dhanka isu socodka ah.
Wax ka qabashada dhibaatada dadkii u xilsaarnaa ma ahan kuwo u soo jeeda, balse kaliya waxa ay barahooda bulshada iyo warbaahinta qaar oo guul wadeyaal u ah faafinayaan warar ujeedkoodu yahay marin habaabin, si ay isaga difaacaan dhaliisha hortaalla ee ah wax ka qabashada howlaha nadaafadeed ee Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa sawirro iyo muuqaal laga soo duubay oo lagu baahiyay baraha bulshada ku sheegay in dhammaan goobihii uu sida gaarka ah u sameeyay roobkii magaalada Muqdisho ka da’ay laga bilaabay howlo biyo ka bixin ah, taas oo kaliya ku ekeyd xilligii uu goobahaasi ku sugnaa.
Saaka way ku dhibanyihiin bulshada marista wadooyinka ay biyaha jareen, waxaa ugu daran dadka da’da ah oo mararka qaar ku dhex kufaya dhiiqada taalla jidadka magaalada.
Nadaafad darradan ka jirta Muqdisho oo howlaheedii bilic siinta laga gaabiyay ayaysan bulshadu ku cabiri karin dareenkeeda, taas oo ka dhalan karta in lagu bartilmaameedsado ka hadal baahidooda gaar ah.
Muqdisho waxay u baahan tahay howlo nadaafadeed oo joogto ah oo ay muhiim tahay in ay horboodaan dadka u xil saaran howshaas oo ah dowladda hoose ee Xamar, sidoo kalena bulshada qeybaheeda kala duwan lagu baaraarujiyo ka qeyb qaadashada howlaha bilicsiinta muraayadda dalka.
Dhibaatada ugu weyn ee soo wajahdo dadka ku nool Muqdisho, ma ahan oo kaliya inay ka xirmaan wadooyinkii ay mari lahaayeen, balse waxaa ugu halis badan oo dhaca xilliyada qaar in ay dadka liita tabar ahaan sida carruurta iyo duqowda ay ku waxyeeloobaan oo ay u dhintaan roobabka ka da’ a Magaalada Muqdisho.